Sere-Down Spout athlọ ịsa ahụ foset Chrome
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / Sụta-Down Spout athlọ ịsa ahụ foset Chrome
Otu nkwekọrịta na imepụta ihe, ihe nfepụta ihe dị mfe, dị mfe iji dozie mmiri oyi na mmiri ọkụ. Ihe a na-adọrọ adọrọ na-enye ihe doro anya na ntanetị.
Ọ dị mfe ịdọrọ ala na-enye ntụgharị ntụgharị ogo 360 ma wepụ, dị ka ihe nchacha ntutu maka ntutu isi, dị ka ebe a na-asa akwa isi maka sprayer. Ejima arụ ọrụ ịgba na ị họọrọ: siri aerated iyi na siri ike ịgba iyi na boosted nchegbu ike.
Brass mmepe na nchara na-eguzogide ọgwụgwụ, zinc alloy otu-ahụ, kọntaktị pullout rv sink taps, sturdy na nche! Ceramic disc valve na-enye akara akara maka arụmọrụ na-enweghị ntụpọ nke nwere ike ịlanarị oge 500,000 mepee ma mechie nlele.